ALLAMANDA: SAWIRADA IYO SHARAXA, NOOCYADA, SIFOOYINKA BEERASHADA IYO DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Allamanda: korriinka iyo daryeelka guriga
Way adagtahay inaadan fiiro gaar ah u qaadin baadiyaha quruxda badan, oo leh caleemo dhaadheer. Tani waa allamanda.
Gaar ahaan qurux badan waa dhirta ku nool deegaan dabiici ah. Iyo in kasta oo dhaqanka koray ee shuruudaha macmalka ah, sidoo kale ma kari karo, laakiin waxay u muuqataa mid aan soo jiidasho yar.
Dhaqanka waxaa loo magacaabay ka dib professor at University of Leiden, Frederick Allamand. Goobta dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee loo yaqaan 'tropics' ee Koonfurta Ameerika, oo ah badiba Braziliyaanka. Waa dhaqameed fara badan oo ka mid ah qoyska Kutrovye.
Allamand wuxuu ku koraa qaabka geedaha, duurka, lianas. In height dhererka 2 ilaa 10 mitir. Caleemaha khafiifka ah ayaa dabacsan. Inta badan wakiillada noocyada waxay leeyihiin wax weyn oo ku jira ubaxyo udub dhexaad ah oo ah caleemo jaale ah, midab, casaan, midab leh. Mid kasta oo ka mid ah ubaxyada ayaa leh qaab ka mid ah buro wax-soosaaray, waxay ka kooban tahay shan faashad oo daciif ah oo kor u kaca qaybo ballaaran.
Dhammaantood waxaa lagu ururiyaa inflorescences waaweyn. Marka la eego qaabka la furay, qaddarkoodu waa ilaa 12 cm Ka dib markii ubax, miro geedo ah oo qaabka sanduuqyada la buuxiyo tiro badan oo ah miraha ayaa la dhigaa meel ubax ah. Caleemaha Oval ee dhirta waxaa loo dhigaa labo-labo, waxay leeyihiin farta calaamadsan, waxay ku kala duwan yihiin isku-simanaanta iyo hodantinnimada midabka cagaaran ee raaxo leh oo leh saameyn aad u wanaagsan.
Allamanda waxay ku jirtaa dhammaan xagaaga iyo dayrta. Iyada oo daryeel ku habboon, ubaxyada badan oo ku celiya sanadka ilaa sanadka. Dhaqanku wuxuu ku fiican yahay xaaladaha sii kordhaya ee jardiinooyinka jiilaalka iyo beeraha oo leh fursado balaadhan oo muuqda iyo qoyaan badan. Ma aha wax aad u fudud in la koro allamandu xaafadaha ku nool.
Waa muhiim! Markaad sii kordhiso allamanda, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qaanuun si aad uga taxaddariso daryeelidda dhirta, sababtoo ah dhammaan qaybaheeda waa sun. Dhaqanka casiirka caanaha ayaa keeni kara cuncun maqaarka iyo indhaha.
Waxaa jira qiyaastii 15 nooc oo ah allamanda.
jilicsanaanta - nooca allamand ee ugu badan guriga. Waxay magaceeda u keentay sababtoo ah saameynta cuncunka ah ee jidhka qaybaha dhirta iyadoo ay sabab u tahay cunidooda. Dhanka kale, tani waa dhir aad u kordhay oo soo koraya, awood u leh in ay gaaraan lix mitir dhererka iyo ka badan. Petals waxay yeelan kartaa siyaalo kala duwan oo jaale iyo midab leh;
guduud - mid ka mid ah noocyada sii kordhaya ee sii kordhaya. Caleemaheeda ayaa yar yar, oo laga soo ururiyey meelo 4 ah. Tufaaxa ubaxa waxay ka iman karaan lilac cirridka ah oo u eg mugdi madow. Waxay badanaa ku yaalaan dusha sare ee geedka canabka ah;
oleandrolist - geed ku leh neskuschimi laamood ilaa 1 mitir oo dherer ah. Qeybta sare ee caleemaha waxay leedahay midab cagaaran oo dhalaalaya, hoose - iftiin. Ubaxyada midab huruud ah ayaa ka yara hooseeya oo wax yar ka yar kuwa allamandi-lianas. Waxay u furan yihiin ilaa 4 cm;
Terry huruud ah - noocyada caamka ah, sidaa daraadeed waxaa loogu yeeraa tufaaxa ubaxa. Dhaqanku wuxuu ku koraa qaabka geedo leh dherer aan ka badnayn 90 cm oo aan lahayn caleemo. Calaamadaha dhuxusha oo dhererkoodu gaadhay ilaa 12 sentimitir dhererkoodu waxay leeyihiin petioles gaaban. Ubaxa waxaa lagu dhajiyaa pedicloolada dheeraadka ah;
sharaf leh - muuqaal muuqaal ah, kuwaas oo caleemaha waxaa lagu kala soocaa by casaan guduudan. Ubaxyo huruud ah ayaa lagu kala saaraa joogitaanka lafaha caddaanka ah iyo urta quruxda badan;
grandiflora - nooc ka mid ah fuulka alamarka ee Allamand oo leh ubaxyo liin leh oo liidata oo leh ilaa 10 cm oo cabbirkeedu yahay caleemaha waa qoyan;
Shota - nooc ka mid ah duufaan joogto ah oo sii kordhaya Allamand, oo leh xoogaa yar oo caleemo ah, daboolay maqaar guduudan oo maqaarka ah. Caleemaha waa mid ballaaran, oval, cagaar mugdi ah oo midab leh, kuna socota 3-4 buugyarood. Ubax waa weyn, qani ku ah jaale leh khadadka brownish.
Waxaa wanaagsan in dhaqanka lagu hayo lagu koriyo ama jardiinooyinka waaweyn ee jiilaalka leh nidaam heerkul ah oo aan ka hooseynin +18 digrii. Marka ugu horeysa, geedka ayaa si fiican u dareemaya aag deggan, laakiin marka uu korayo, waa in wali loo wareejiyo beerta lagu koriyo ama beerta jiilaalka. Dhamaan dadka, iftiinka, qoyaanka hawada iyo heerkulka ayaa muhiim u ah.
Ma taqaanaa? Xilliga xagaaga ama xilliga dayrta ee xilliga xagaaga ama xilliga dayrta, Allamanda wuxuu bilaabaa inuu u dhaqmo si aad u xiiso leh - ubaxyadu waxay noqdaan midab khafiif ah.
Allamanda waxay ka go'an tahay iftiinka ugu badan ee suurtogalka ah, sidaa darteed waxay dareemeysaa inay aad ugu roon tahay koonfurta, koonfur-bari iyo koonfur-galbeed. Laakiin xilliga kuleylka gaar ahaaneed, dhirta waa in laga ilaaliyaa qoraxda tooska ah, in ka badan 4 saacadood maalintii. Xilliga qaboobaha, allamand waa in ay bixiyaan iftiin macmal ah oo dheeraad ah.
Heerkulka ugu fiican waa:
xagaaga - laga bilaabo +20 ilaa +24 digrii;
xilliga qaboobaha - laga bilaabo +15 ilaa +18 digrii.
Joogitaanka joogtada ah ee warshadda heerkulka ka hooseeya +15 darajo ayaa sababi kara dhimashadiisa. Qorshayaasha Allamand ayaa si khaas ah uga horimaanaya.
Waa muhiim! Allamand dhab ahaantii ma garanayo heer-kulka heer-hoose. Kaliya nidaam heerkulka muddada-gaaban + + 1 digrii ayaa awood u leh inay bedelaan. Marka dhaqanka barafku markiiba dhinto.
Allamand waxay u baahan tahay qoyaan badan. Tiradani waa inay ahaataa ugu yaraan 60-70 boqolkiiba. Ku buufinta nidaamsan ee jilicsan, biyo qabow ma caawineyso in la sii wado heerkan. Sidoo kale xasilin nuxurka qoyaanka ee warshadda saaran balaashka leh lakabka qoyan ee sphagnum, dhoobo dhoobo, ciid, dhagaxyo.
Aad ayay u adag tahay Allamanda in ay ku koraan guriga, maadaama ay soo saartay shuruudo daryeel oo muhiim ah.
Allamand wuxuu jecel yahay qoyaan.
Laakiin inta jeer ee uu waraabiyo waxay ku xiran tahay xilliga:
Xilliga xagaaga, biyaha waa in ay ahaato mid balaadhan, sidaa darteed ciidku ma laha awood uu ku qalajiyo, laakiin sidoo kale maaha mid ku haboon;
xilliga jiilaalka, waraabinta waa in la yareeyaa, waa in ay noqotaa mid dhexdhexaad ah, si lakabka sare ee carrada u leeyihiin waqti ay qalalaan.
Biyaha waraabinta waa inay noqdaan mid jilicsan oo qumman. Geedaha iyaga ku rusheeyaa si gaar ah ayaa loo arkaa dhirta.
Waa muhiim! Inta lagu jiro xilliga ubax, biyaha inta lagu jiro buufinta waa inaanay ku dhicin ubax si looga fogaado sameynta dhibco mugdi ah on tufaaxa.
Xilliga xagaaga iyo guga, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya iyo Bacriminta ubax waa in la sameeyaa mar ama laba jeer bishii. Dhammaanba kuwa ugu haboon waxay ku habboon yihiin ujeeddooyinkan si dharka ugu adag ee guryaha loogu talagalay. Isticmaalka kale ee macdanta iyo dhismooyinka organic sidoo kale waa xalka ugu fiican.
Allamandas waa la gooyaa si loo gaaro hadafyo dhowr ah:
xannibaadyada dhererka koritaankooda;
daboolka caleenta oo badan;
sii kordhaya tirada ubaxyada iyo ubax leh hodan.
Gooyaa waa in la sameeyaa dhamaadka jiilaalka - horraanta gu'ga ka hor ubax, ama dhamaadka dayrta ka dib joojinta ubax. Dalaggu waa inuu noqdaa mid saddexaad ama badh dhererka laanta. Gooyuhu waa inuu ka sarreeyaa caleenta caleemaha leh dhibco kobcin. Caleemaha qallafsan iyo dhererka weyn waa in laga saaraa. Haddii loo baahdo, qabo caleemaha yar yar. Dhaqanka si fiican ayaa loo sameeyay, sidaas darteed xitaa baadiyaha ah ee si degdeg ah u koraya oo si weyn u koraya allamanda waxaad samayn kartaa nin aad u qurux badan. Sidaa darteed, taageero gaar ah ayaa loo isticmaali karaa.
Allamandu waa in lagu tallaalaa da'da qaangaarka ah labadii sano ama saddex sano labadaba, da'da yar yar sanad kasta. Waxaa lagula talinayaa in la sameeyo isugeynta gugaanka xilliga gu'ga si loo kiciyo koritaanka. Si loo yareeyo koritaanka dhererka taangiga oo leh dhexroor 20 cm, dhirta mar dambe dib uma noqon karto, gaabis oo kaliya xididdada iyo ku darida ciidda cusub.
Cabbiraadda awoodda loo yaqaan 'transplantation' waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan ee 'allamand': si dhakhso ah u koraya, waxaa fiican in la isticmaalo "koritaanka", oo leh kayd, qiyaasta dhererka, dhererka dheriga ayaa la mid ah nuska dhirta geedka. Weelka soo degayaa waa inuu lahaadaa daloolka godka. Lakabka biraha ee dhoobo ama dhagaxyada ayaa la dhigaa dhinaca hoose, ka dibna isku dar ah ciidda, xididdada geedka waxaa la dhigaa on, oo la rusheeyaa dhulka hadhay oo isku dhafan. Taageero fuulid ayaa lagama maarmaan ah.
Waa muhiim! Alaabta cusub ee la iibsaday Allamand waa in la googooyaa wax ka baddan kaddib 14 maalmood oo karantiin ah, taas oo u ogolaanaysa aqoonsiga dhibaatooyinka hadda jira ee dhirta cusub (cudur, cayayaanka) iyo u waafajinta xaaladaha isbedelay. Muddadani waxay kaa caawineysaa inaad go'aamiso oo aad dooratid kartida saxda ah ee ku-tallaalidda.
Si loo xaqiijiyo kobcinta wax soo saarka iyo ubax allamanda, carrada yaryar oo hooseeya, oo lagu garto qiimaha nafaqada, xakamaynta, dhexdhexaadnimada, ayaa si fiican u habboon. Waxaa lagu diyaarin karaa caleenta, sodan, peat, humus iyo ciid oo lagu qiyaaso 4: 2: 2: 2: 1 ama laga bilaabo soday, dhulka caleen, humus iyo ciid oo ah saamiga 2: 1: 1: 1.
Allamanda waxay ku dhalataa abuurka iyo daaqsinka.
Faafinta by gooyn waxay dhacdaa dhowr marxaladood:
Dhamaadka jiilaalka - oo leh bilawga guga, gooyn yar oo qorraxdu waa la googooyaa, dhererkoodu waa 8 ilaa 10 cm.
Laga soo bilaabo hoosta, qaybaha la abuuray ma noqon doonaan kuwo aad u sarreeya si ay u hirgeliyaan kiciyaha kicinta (Zircon, Kornevin, Heteroauxin, xalalka succinic).
Gooyn waxaa lagu beeray ciid qoyan, kaas oo si wanaagsan u kululeynaya xagga hoose.
Ku dabajir geedo leh caag balaastig ah ama qalab kale oo hufan oo bixiya iftiin baaxad leh.
Si aad u sameyso hawo joogto ah iyo moobey, ilaalinta heerarka ugu wanaagsan ee qoyaanka, iyo xaaladaha heerkulka heerkoodu + 23 ... +25 digrii.
Marka caleemaha ugu horeysa ay muuqdaan, oo tilmaamaya in rooting ay ku guulaysatay, jarida waxaa lagu beddeli karaa ciidda nafaqada.
Hal ama laba bilood ka dib waxaa jiri doona horumar buuxda ee dhalinyarada Allamand.
Waa muhiim! Allamand wuxuu loola jeedaa dhirta si wax ku ool ah u qaadan kara xididada biyaha, gaar ahaan marka lagu daro kiciyaha xariirka.
Tilmaamaha abuurka abuurka:
Dhamaadka dhammaadka Febraayo ama bilawga bisha March, miraha allamand waa la beerayaa.
Waxyaabaha ka hor beerashada waxaa lagu daaweeyaa xal daciif ah oo ah Kansar dhalan, waa la dhaqay oo la qalajiyey.
Seeds lagu beeray carrada qoyan oo ka kooban ciid iyo peat ee saamiyada siman, fogaan ah 3 illaa 5 cm, rusheeyey lakabka carrada ee 0.5 cm.
Daboolka waxaa la siiyaa balaastik ama wax kale oo hufan.
Xilliga hawada iyo buufinta.
Joogso nidaamka heerkulka + + 22 ... +25 digrii.
4-6 usbuuc ka dib waa inay soo baxaan caleemaha kowaad.
Markaas waa inaad si tartiib tartiib ah u qortaa geedo si ay u jirtaan hoy la'aan.
Ka dib muuqaalka caleemo dhowr ah, geedo isbedel ah oo si tartiib tartiib ah ugu beddelaa weelal gaar ah oo leh nafaqo ciid ah oo nafaqo leh.
Ma taqaanaa? Liana-ga midabka leh ee quruxda badan leh waxaa laga heli karaa laga soo bilaabo allamanda guduud ah ilaa huruud.
Nidaamka soo koraya allamand wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo isdhexgal ah, oo aan la ilaalineynin kuwaas oo horseedi kara dhacdooyinka cudurada:
ka baxo curl iyo soo noqo brown - Natiijada qoyaan badan ama hypothermia. Waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin lagu xakamaynayo waraabka iyo xaaladaha heerkulka;
caleemaha waxay noqdaan huruud - la'aanta iftiin iyo nafaqo. Sababtoo ah, dhirta si xun u bloom. Bixinta helitaanka ugu fudud ee bacriminta iftiinka iyo macdanta ayaa kaa caawin doona inaad la qabsato dhibaatada;
Caleemaha waa la jiidaa, caleemuhu waxay u jeedaan cirro - Sababta ayaa ah la'aanta iftiinka iyo nafaqada. Waxaa lagama maarmaan ah in la abaabulo iftiin dheeraad ah iyo quudinta dhirta;
ayaa afkoda saldhig u ah inay billaabaan madow iyo kallana - waxay u dhacdaa sababtoo ah dadka isku dhejisan marka la beerto iyo kor u kacaya heerkulka hoos u dhaca. Si loo ciribtiro dhibaatada, dhirta caafimaadka leh waa la dhigayaa, waraabin dheeraad ah ayaa la qaadaa iyadoo lagu daro fangas dil, shaybaarka burburay waa la burburiyaa.
Ma taqaanaa? Allamand wuxuu cadeeyay inuu yahay dhir daawo oo wax ku ool leh oo leh saameyn lid ku ah bakteeriyada stafylococcal. Waxay ka caawisaa in laga fogaado dhibaatooyinka duumada, cagaarshowga, oo la dhibtoonaya qof weyn.
Ka mid ah cayayaanka, ugu cidhiidhiga iyo khatarta ah ee Allamand waa nematodes, aphids, caarada caarada, whiteflies.
Si loola dagaallamo, tallaabooyinka soo socda waa in la qaadaa:
beerista geedka ilaa meel cusub;
si loo daweeyo ciidda iyo dhaqanka diyaar garaynta cayayaanka.
Aad bay u yartahay, geedi socodka koritaanka allamand ayaa si siman u socda, inta badanna waxaa dhacaya dhibaatooyinka qaarkood. Walaac gaar ah waa xanuunada dhaqanka ah ee dhacaya marka daryeel aan habboonayn dhirta. Si looga fogaado calaamadahaas, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u fuliso waraabinta, bacarimiso, si ay u hoggaansamaan kulaylka iyo habka iftiinka.
Sidoo kale, markaad ka taxadartid allamanda, midna waa inuusan iloobin astaamaha sunta ah ee dhaqanka, sidaa darteed, taxadar waa in la fiiriyaa:
ka dib markaad transplanting, qalajinta gacmaha dhirta waa in lagu dhaqaa saabuun;
waa wax aan la aqbali karin in ay ka shaqeeyaan dharka u furan si aysan casiirku si khatar ah u garaacin maqaarka;
Ha dhigin dhirta si ay u helaan carruurta.
Ka taxadar ubaxyada ubaxa ee gudaha.
Allamanda waa dhaqan dhaqan, oo aan korin karin by kasta beerta. Laakiin waafaqsanaanta xeerarka iyo talooyinka beeritaanka, koritaanka iyo daryeelidda waxay gacan ka geysan doontaa sidii ay ku gaari lahaayeen guulaha arrintan. Iyo quruxda cajiibka ah iyo caraf udgoon ee ubax ah waxay noqon doontaa abaalmarin u qalma ee loogu talagalay florist xirfad leh.